बलात्कृत नारीकाे त्याे सुसाइट नाेट » Khabarbit
📝 शिशिर भट्टराई
७ भाद्र २०७६, शनिबार ०८:३५
शिशिर भट्टराई । साँझ पर्नै लागेको थियो । साउनको दिन, क्षितिजको कालो बादलमा बृद्ध घामको हल्का रातो दृष्य मात्र देखिन्थ्यो । अस्तब्यस्त र दौडधुपपूर्ण जीवन, म केहि समय फ्रेस हुनका लागि नहरको डिलमा निस्कने निधो गँरे ।
म वल्लो डिलमा । पारीपट्टी एक नारी रोइरहेको जस्तो देँखे । लगभग साँझ परिसकेकाले यसै हो भन्न सकिन । ती नारी को हुन र किन रोइन मलाई थाहा भएन । ‘दिदी’ मैले सानो स्वरमा बोलाएँ । तर उताबाट कुनै जवाफ आएन । मैले फेरी भने ‘ए दिदी’ तर पनि उत्तर आएन । मैले अलि साह्रो सोरमा बोलाउँने निर्णय गरेँ । ‘ए….दिदी…..किन नबोल्नुभको ३ चोटी बोलाइसके’ । बल्ल उत्तर आयो । ‘कसलाई मलाई बोलाउँनु भकोे हो ?’ अलि रुन्चे र नाँके स्वरमा उताबाट उत्तर आयो । मलाई ती नारी रुदै बसेकी छिन भन्ने निस्चित भयो अनि मैले भने । ‘हो हो, तपाइँलाई नै बोलाएको किन रुनुभएको भनेर नी ?’ उताबाट होइन भन्ने जवाफ आयो ।
त्यहाँ उनले आफु नहरमा आत्महत्या गर्ने कुरा उल्लेख थियो । उनको नोटमा १ बर्षको छोरा र श्रीमानलाई असिमित प्यार भन्ने शब्द उल्लेख थियो । उनले लेखेकी थिइन । ‘प्रिय…… तपाइँको हातमा यो नोट पर्छकी पर्दैन ? त्यो मलाई थाहा छैन । भगवान मार्फत मेरो आग्रह त्यो छोरालाई सधै माया गर्नु । म यो संसारमा नरहेपनि त्यो छारो मेरो मायाको चिनो छाडेर गएकी छु । म बलात्कृत भएँ । त्यो मेरो गल्ति थिएन । मैले न्याय पाइँन त्यो मेरो भुल थिएन । मैले परिवार र समाजको अगाडि इज्जत पचाउँन सकिन । त्यो समयको खेल थियो । ……………….।’
उनले बतात्कृत भएको कुरा यसरी सुनाइन् । ‘भाई ! म एक बेलुका जागिरबाट घर फर्कदै थिएँ । त्यो जङ्गल छेवैमा । म स्कुटीमा थिएँ । मेरो स्कुटी जबर्जस्त रोकाइयो । त्यहाँ ३ जना केटाहरु थिए । त्यसपछि………………………।’
मैले त्यो घटना श्रीमानलाई सुनाएँ । उल्टै मलाई गालि गरे । परिवारमा थाहा भएछ । मैले छोएको पनि परिवारले खान छाड्यो । गाउँघरमा थाहा भएछ । त्यहाँ पनि मलाई नै दोषी देखाइयो । ती बलात्कारी मलाई सङ्का छ । त्यो मध्यको एउटा ……कै छोरा हो सायद । मैले प्रहरी सँग पनि कुरा गरे । तर न्याय पाइँन । एक प्रहरी अधिकारीले अनौपचारीक कुराकानीमा तुच्छ र हेपिएको ब्यवहार गरे । उनले म जस्तालाई न्याय दिन नसक्ने र न्याय लिनका लागि ५० लाख चाहिन्छ भन्ने तर्क दिए । एक कानुन् ब्यवसायी सँग सल्लाह गँरे । उनले पनि सहयोग गर्न नसक्ने जवाफ दिए । यसको एउटै कारण हो भाई म गरिब छु । म सँग पैसा छैन भन्ने सबैलाई थाहा छ । त्यहि भएर म बलात्कृत भएर तिरस्कृत भएँ । आफै बलात्कृत भएँ त्यो पिडा त छदैँछ । त्यसमा पनि परिवार र समाजको पिडा । श्रीमानले पनि फोन गर्दैनन् । आत्महत्या गर्नलाई सुसाइट नोट लेखेर आएकी । १ बर्षको छोरा छ । त्यसको मायाले गर्दा केहिबेर पर्खिएँ । म मेरो छोरालाई….उनी भन्दाभन्दै फेरी रुन थालिन । म भित्र पिडाको आगो बलिरहेको थियो । उनी कसरी भोगिरहेकी होलिन ? म सोच्दै थिएँ ।
‘दिदी अब फेरी एकपटक न्यायका लागि लडौँ न त’ मैले आग्रह गरेँ । तर उनले अस्वीकार गरिन । उनले भनिन् ‘केवल मेरो अन्तिम इच्छा छ भाई ? मैले भने ‘के ?’ मेरो फोन उठाएनन् । मेरो श्रीमानलाई सोध्ने इच्छा थियो । मेरो माया लाग्छकी लाग्दैन भेनेर । यस्तै कुरा हुँदै थिए ……………………………।
Tags: बलात्कृतविचारसुसाइट नाेट
झुम्का जेसिजको ‘जेसिज सप्ताह’ भदौ ९ देखि
शिशिर भट्टराई खबरबिटका प्रमुख संवाददाता हुन् । उनी स्थानीय समसामायिक विषयमा कलम चलाउछन् ।
विश्वव्यापी माहामारीको कहरका बीचहामी पहिलो...